गणेश भगवानले तपाईको मनोकामना पूरा गरुन् ! हेर्नुहोस् असोज २६ गते मंगलबारको राशिफल Canada Nepal
गणेश भगवानले तपाईको मनोकामना पूरा गरुन् ! हेर्नुहोस् असोज २६ गते मंगलबारको राशिफल
मिथुन राशि - जीबन साथीको सहयोगले गरिएको ब्यापार ब्यवसायमा मनग्य लाभ मिल्नेछ । बोलिको प्रभुत्वले मानसम्मानको प्राप्ति हुनेछ । मान्यजनको साथ सहयोग द्वारा गरीएका कार्यहरु सजिलै पुर्ण हुनेछन । बोलिको प्रभाबको कारण मान्यजन को साथ पाईनेछ । कार्य सम्पादनका क्षेत्रमा सावधानि साथै गोप्यता अपनाउनु पर्ने देखिन्छ ।
धनु राशि - जीबन साथीको सहयोगले ब्यापार ब्यवसायमा सुधार आउनेछ । जिद्यी स्वभाब तथा अरुले देखाएको बाटो अनुशरण नगर्नाले सामान्य दुर्घटना निम्त्याउला । सबारी साधनको प्रयोगमा ध्यान दिनु होला । सहि निर्णय हुन नसक्दा परिबारीक कलहको सामाना गनुपर्नेछ । यापार ब्यवसायमा समय खर्चिदा उत्तम रहनेछ ।
आश्विन २६, २०७८ मंगलवार ०६:०१:३२ बजे : प्रकाशित